चर्चित अभिनेत्री करिश्मा र सांसद शान्ताले कहाँबाट दिँदै छन एसईईको परीक्षा ? « Kathmandu Television HD
चर्चित अभिनेत्री करिश्मा र सांसद शान्ताले कहाँबाट दिँदै छन एसईईको परीक्षा ?
काठमाडौं । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको परीक्षामा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ एवं चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर र सांसद शान्ता चौधरी पनि सहभागी भएका छन् ।मानन्धरले काठमाडौंबाट परिक्षा दिँदैछिन् भने चौधरीले दाङको तुल्सीपुरबाट परीक्षामा सहभागी हुँदैछिन् ।
नेकपाकी सचेतक चौधरी मुक्त कमैयाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् । खुला विद्यालय प्रणालीमा पढेकी चौधरीले ३८ वर्षको उमेरमा सेन्टर मावि तुल्सीपुर केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछिन् । उनले महेन्द्र मावि तुल्सीपुरमा कक्षा ८ मा भर्ना भएर पढ्न थालेकी थिइन् ।
त्यसैगरी, अभिनेत्री मानन्धर पनि कक्षा ८ मा नै भर्ना भएर पढ्न सुरु गरेकी हुन् । उनी काठमाडौंको मैतीदेवीस्थित त्रिवेणी माविको नियमित विद्यार्थी हुन् । विद्यालयको नियमित विद्यार्थीको रुपमा मानन्धरले डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक मावि केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछिन् ।